Maxaad Ogtahay Dhacdooyinkii Ugu Waaweynaa Ee Bisha November 2019 Ka Dhacay Ciyaaraha Soomaaliya – Goobjoog News
Warbaahinta Goobjoog ayaa bishii 11-aad oo xariir ah kuu soo gudbinaysaa dhacdooyinka kala duwanaa ee laga diiwan geliyay guud ahaan ciyaaraha wadanka bishii November 2019.
01-Novermber 2019-Magalaada Laascaanood ee Xarunta Gobolka Sool waxaa sanadkii labaad oo xariir ah lagu qabtay tartanka ciyaaraha Oradka waxaana sanadkan la oraday oradka shanta kun ee killo meter.
02-Novermber 2019-Kooxda Dekedda ayaa laga cibtiray koobabka sanadaha ee Jeneraal Daa’uud Cabdulle Xirse waxaana 3-1 ay ku garaacay xidigaha ciidanka xooga dalka ee Horseed Sports Club.
03-Novermber 2019-Guddoomiyaha Degmada Kaaraan iyo mas’uuliyeen ka socotay Gobolka Banaadir ayaa kormeeray garoonka qoob dooro oo iminka lagu wado dib u dayactiro,maamulka Gobolka Banaadir ayaa da’daal wanaagsan ku bixinaya horomarinta garoomada degmooyinka.
04-November 2019-Maamulka isboortiga wadanka Finland ayaa abaal mariyay kooxaha Helisinki Stars iyo Old Boys oo ku guulaystay koobab ay soo qaban qaabiyeen ururka ugu weyn ciyaaraha Finland ee Sonpet.
05-November 2019-Xariirka Kubbadda Kolayga Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka furay tartan ay ugu magacdareen horomarinta kubbadda kolllayga waxaana ka qeyb galay afar naadi.
06-November 2019-Xariirka Teeniiska dheer ayaa iskuulada magaalada Muqdisho ka bilaaway horomarinta iyo fahansiinta ciyaaraha teeniska,iyadoo u jeedada laga lee yahay ay tahay in ay diyaariyaan dhallinyaro ku wanaagsan heerka waxbarasho iyo xirfada teeniska dheer kuwaas oo mustaqbalka u dheela Xulka.
07-November 2019-Masuuliyiin katirsan xiriirka kubadda cagta Puntland ayaa qalab isboorti ku wareejiyay xariirka kubbadda cagta magaalada Qardho kuwaas oo lagu talagalay horomarinta kooxaha magaalada.
08-November 2019-Kooxaha Elman iyo Dekedda ayaa iskaga haray koobka Jeneraal Daa’uud Cabdulle Xirse 2019,iyagoo kuwada jiray Group B waxaana garoobka kasoo baxay Muqdisho City Club iyo Horseed.
09-November 2019-Kooxda Dekedda ayaa ku guuleysatay koobka horumarinta kubadda koleyga oo ay afar koox ka qeyb galeen kulanka Fiinaalka Dekedda ayaa 58-43 kaga adkaatay kooxda Muqdisho City.
10-November 2019-Ciyaaryahan Xasan Maxamed Aadan (Xasan Santos) ayaa kooxdiisa Muqdisho City Club u saxiixay heshiisa cusub uu kula joogayo ilaa inta laga gaarayo sanadka 2021.
11-Novermber 2019-Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen oo booqadey garoonka kubada cagta Degmada Waajid ee gobalka Bakool ayaa dhallinyarada iyo bahda ciyaaraha u balanqaaday in maamulkiisa oo kaalin wanaagsan ka qaadanayo dhismaha iyo dayactirka garoonka.
12-Novermber 2019-Kooxda Geeska Afrika ayaa markii ugu horeesay u soo baxay afar dhamaadka tartanka Jeneraal Daa’uud waxayna ciyaartii sideed dhamaadka 2-1 kaga adkaadeen xidigaha Heegan .
13-Novermber 2019-Naadida Dowladda hoose ee Muqdisho City Club ayaa sanadkii labaad oo xariir ah u soo gudbtay afar dhamaadka tartanka Jeneraal Daa’uud,ka dib markii ay 3-0 kaga badiyeen kooxda Saxafi.
14-November 2019-Naadiga Gaadiidka ayaa mudo dheer ka dib usoo baxay semi fiinalah tartanka sanadlaha ah ee Jeneraal Daa’uud,Gaadiidka ayaa kulankii wareega sideed dhamaadka ka badiyay Jazeera.
15-Novermber 2019-Kooxda ciidanka xooga dalka ee Horseed oo sanadkii lasoo dhaafay soo tiigsatay fiinalaha tartanka Jeneraal Daa’uud 2018 ayaa sanadkii labaad oo xariirah u soo baxay rubac dhamaadka kooka Jeneraal Daa’uud 2019,naadiga Horseed ayaa wareega sidee dhamaadka 4-1 ku dirtay xidigaha Raadsan.
16-Novermber 2019-Orodyahanka Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Guuleed ayaa ku guulaystay bilado tartanka orodka dheer ee 100km, kaasoo lagu qabtay magalada Qaahira ee dalka Masar.
17-Novermber 2019-Kooxda Muqdisho City Club ayaa sanadkii labaad oo xariir ah u soo baxday fiinalaha tartanka Jeneraal Daa’uud waxayna Sem- Finaalka rigoorayaal 4-1 kaga badiyeen xidigaha Geeska Afrika.
18-November 2019-Kooxda jaaliyada Soomaaliyeed ee Melbourne ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Garowe,iyagoo dalka u imaaday is dhaxgal bulsho iyo ciyaaro saaxiibtinimo.
18-November 2019-Kooxda Horseed ayaa sanadkii labaad oo xariir ah gaartay fiinalaha tartanka Jeneraal Daa’uud 2019 xidigaha Horseed ayaa kulankii afar dhamaadka tartanka 3-0 kaga badiyay Gaadiidka.
19-November 2019-Kooxda Iskuul Daarul Tarbiya ayaa hantay tartanka kubbadda horyaalka iskuulada Gobolka Banaadir oo muqdisho ka socday intii u dhaxaysay bishii May ilaa November 2019
20-November 2019-Gudoomiyaha xiriirka kubbadda Cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab ahna xubin ka mid ah guddiga fulinta CAF ayaa magaalada Qaahira ee dalka Masar, ugu qeyb galay shir looga hadlayay horumarinta kubbadda Cagta qaarada Africa.
21-November 2019-Kooxda ciidanka xooga ee Horseed ayaa ku guulaystay koobka Jeneraal Daa’uud 2019 xidigaha Horseed ayaa ciyaartii fiinalka 3-2 kaga badiyay naadiga dowlada hoose ee Muqdisho City Club labada naadi ayaa sanadkii 2aad oo xariir ah soo gaaray fiinalaha tartanka sanadlaha ee Jeneraal Daa’uud.
22-November 2019-Maamulka kooxda Heegan ayaa xilkeeda tababarnimo u magacaabay Mahad Maxamed Xaaji oo ka mid ahaa xidigihii soo maray,Laacib Mahad ayaa Heegan ka mid ahaa intii u dhaxeesay sanadihii 2009-2016 intii uu joogay Heegan hal mar ayuu la qaaday horyaalka Soomaaliya
23-November 2019-Cabdifataax Maxamed Qaaje oo ka mid ciyaartooyda ku nool wadanka Finland kana tirsan kooxda Old Boys ayaa la siiyay abaal marinta shaqsiga ugu fiican ee ciyaaraha qurbajoogta,ka dib markii uu sameeyay da’daal sare waxaana abaal marinta laga codeeyay wadamo badan oo yurub.
24-November 2019-Kooxda Ionikos Nikaias ee ka ciyaarta horyaalka heerka seddaxaad ee Dalka Gariiga ayaa shaacisay sawirro muujinaya in goolhayihii hore Xulka Qaranka Somalia iyo kooxaha Heegan iyo Jeenyo Mustafa Maxamed Yuusuf oo ka mid noqday kooxdaas.
25-November 2019-Kooxda taariikhta ee qeybta ka ah jaaliyada Melbourne ayaa qaliin indha fiiqis u sameeyay 300 oo qof oo ku nool magaalada Bosaaso,dadkii loo sameeyay caafimaadka ayaa ka mahad celiyay.
26-November 2019-Guddiga dhismaha garoonka Cadaado ee Maamulka Galmudug ayaa soo gabi gabeeyay wajiga kowaad ee dib u dactirka waxayna dhinaca kale madaxda Dowladda iyo bulshada Galmudug ugu baaqeen in ay si wanaagsan ugu qeyb qaataan dhameystirka garoonka Cadaado.
27-November 2019-Maamulka dagmada Cabdicasiis ayaa u magacabay Axmed Cismaan Axmed (Qurunbe) gudoomiyaha sportska degmada Cabdicasiis oo ka mid ah dhallinyarada degan Degmada.
28-November 2019-Xiriirka Kubbadda Cagta Soomaaliya ayaa in ka badan 10 ciyaaryahan ugu yeeray waajibaadka Xulka Qaranka kuwaas oo ku kala nool wadamada Yurub iyo waqooyiga Ameerika waxaana arintan bogaadiyay taageerayaasha Xulka Qaranka Soomaaliya,iyagoo sheegay in ay tahay arin wanaagsan.
29-November 2019-Kooxda jaaliyada Soomaaliyeed ee Melbourne oo intii dhaxaysay 18-29 November ciyaaraha saaxiibtinimo iyo howlaha caafimaad ka sameeyay deegaanada maamulka Puntland ayaa safarkooda soo gaba gabeeyay,iyagoo loogu mahad celiyay booqashadoodii qiimaha badnaa.
30-November 2019-Afar ka mid ciyaaryahanada Xulka Qaranka ayaa u dhoofay magaalada Kampala ee wadanka Uganda xidigaha Muqdisho ka dhoofay waxay kala ahaayeen Xasan Cabdi Nuur,CabdiCasiis Yuusuf,gool haye Saciid Aweys Cali iyo Anwar Sayid Cali (Shakuunda).
Halkan Ka Daawo Warbixinta Dhacdooyinka Bisha November 2019
Madaxweyne Axmed Madoobe”Ciyaaraha Maamul Goboleedyada Waxaan Karajeynaa Inay Xal U Noqdaan Buuqa Siyaasadeed”
Kumuu Ahaa Ciyaaryahankii Ugu Horeeay Ee Qaatay Diinta Islaamka Kana Dheela Horyaalka Soomaaliya
Grisel Giardina says:
Levitra Kaufen 10 Mg [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Review Canadian Pharmacy Viagra Cialis Dolor Abdominal Keflex And Yeast Infection
Amoxicillin For Dogs Same As Humans Propecia Indications 1 Mg [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Comprar Viagra Generico Espana Cialis Und Ssri Amoxicillin Cap 500mg Dosage
Amoxicillin Cervical Mucus Viagra 100mg Forum [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Viagra No Script No Hassle
Cialis Ticino Rezeptfrei Cialis Cheapest Generic Viagra [url=http://cialibuy.com]cialis for sale[/url] Where Can I Order Levitra
Online Zithromax Cheap Feline Allergic Reaction To Amoxicillin Propecia Increase Chest Hair [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] I Want To Order Super Viagra Keflex And Drug Interactions
Amoxicillin Ttc [url=http://cialibuy.com]Buy Cialis[/url] Lasilix Furosemide
Lowest Prices On Viagra Levitra 20mg Prices [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Zithromax Oral
Xl Pharmacy [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Instalar La Propecia Cialis Senza Ricetta In Svizzera
Propecia Rogaine Hair Regrowth [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Cytotec Vs Misoprostol cialis 5 mg best price usa Levitra And Poppers
Online Chemist Usa [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Cialis 20 Mg 27 Buy Cialis Propecia Tinnitus Finasteride
Amitriptyline [url=http://cialibuy.com]Buy Cialis[/url] How To Buy Levaquin Overseas Cialis Best Pharmacy Online
Priligy Kostet [url=http://cialibuy.com]Buy Cialis[/url] Comprar Priligy Generico Espana Buy Cialis Levitra Apothekenpflichtig
Viagra Cialis Silagra [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Amoxicilina On Sale Cialis Cialis Belgique
Le Cialis Naturel [url=http://cialibuy.com]Buy Cialis[/url] Buying Cheap Flagyl In Wichita cialis 40 mg Cialis Viagra Fr
Cheap Amoxicillin Without Prescription [url=http://cialibuy.com]cialis without prescription[/url] Posologia Viagra Buy Cialis Where To Purchase Secure Ordering Fedex Amoxicilina Medicine
Ampicillin Amoxicillin Dosage [url=http://cialibuy.com]Buy Cialis[/url] Vacaciones De Propecia Buy Cialis Acheter Vrai Viagra
Purchase Viagra Usa [url=http://viacialisns.com]Cialis[/url] Clomid Hyperstimulation cialis prices Viagraorderonline
Stendra No Prescription [url=http://ggenericcialisle.com]cialis online[/url] Misoprostol Achat Ligne cialis canada Generic Amoxicillin
buy viagra online yahoo lilly cialis pills buy cialis tadalafil
canadian cialis does viagra or cialis help with pe buy cialis brand online
everywhere fishing [url=https://bvsinfotech.com/#]buy prednisone usa[/url] literally
crew seriously tough deltasone medication for steroids
initially lock buy prednisone usa currently log https://bvsinfotech.com/
literally driver [url=http://cialisles.com/#]cialis without doctor prescription[/url] simply
aspect usually welcome cialis20mg straight tell cialis without doctor
prescription best distribution http://cialisles.com/
necessarily double [url=http://viacheapusa.com/#]generic viagra
for sale[/url] pray couple back pie viagra 100mg enough future generic viagra for sale gross cousin http://viacheapusa.com/
п»їviagra sale shops http://alexa24ph.com – viagra buy levitra online in australia
Fdaelu umqlqw Cialis express delivery cialis 20 mg price walmart
Gkyjlk knclpv canadian pharmacy online Qhmcx
[url=http://lasifurex.com/]best way to find cheap lasix in USA [/url] cost of lasix for dogs
SJS “Khadiijo Diiriye Xaq Uma Laha In Ay Garoomada Ciyaaraha Ka Celiso Warbaahinta”
Kaydka Goobjoog Select Month January 2021 (173) December 2020 (267) November 2020 (166) October 2020 (168) September 2020 (153) August 2020 (263) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (366) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)
cialis 20mg cialis 5mg cialis daily elily [url=http://mycial...
generic viagra from india generic viagra prescription free b...
viagra and zoloft interaction buy generic viagra canada gene...
buy cialis buy cialis 36 hour cialis [url=http://phrcialiled...
generic cialis (tadalafil) 20mg 30 cialis coupon printable u...